I-GIT DU VALAMBOURG - I-Airbnb
I-GIT DU VALAMBOURG
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMichel
UMichel ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uMichel iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-Gîte de France 3 ezindlebeni, iGîte du Valambourg yindlu enomtsalane yabantu abane, elungiswe ngokupheleleyo ngegadi, ekwenye yezona zitrato ziqaqambileyo nezipholileyo zaseAuvers, kufutshane neziko.
Efumaneka eAuvers-Sur-Oise, kufutshane neMyuziyam iDaubigny kunye nokuphoswa kwamatye ukusuka kwinqaba, iValambourg ihlonitshwa ziziphakamiso ezimbini ezahlukeneyo:
- kubantu abathandanayo okanye abatyeleli abangakumbi, siyakumema ukuba utyelele ePetit Valambourg: https://www.airbnb.com/rooms/184ercial10
- xa uhlala nosapho okanye abahlobo (ukuya kutsho kubantu abane) siyakwamkela apha, kwi-Gîte du Valambourg.
Ingcaciso: Ukukwazi ukufikelela kuzo zombini izibonelelo kwindawo enye. Ukufumaneka, imiqathango nokubhukisha : @
Ixhaswa kumxholo wenye yeentonga zokugqibela zikaVincent Van Gogh, ezingagqitywanga, iGite du Valambourg inokuhlala abantu abane kwindawo ethe cwaka nezolileyo. Nentsapho, abahlobo okanye abantu osebenza nabo, uza kuchitha ixesha elingalibalekiyo uze uphumle ngokwezinto ezilungiselelwe wena.
I-Gîte du Valambourg ingaphezu kweemitha eziyi-60 square, ikumgangatho omabini.
Ngaphantsi, uza kuzuza kwikhitshi elinento yonke, uvule kwigumbi elikhulu lokuhlala elijonge ibala elincinci elinomtsalane. Indawo yokutyela, indawo yokuhlala, unokonwabela indawo yokubasa umlilo nepiyano, kunye neWiFi yasimahla kunye neendawo ezininzi onokukhetha kuzo zeTV.
Ngaphantsi, iGîte du Valambourg iza kukunika amagumbi amabini azimeleyo asebenzayo xa ufika. Yenziwe ngeebhedi ezimbini ezibekwe ecaleni ukuze abantu bathi zava kakhulu, igumbi lokulala ngalinye linegumbi lokuhlambela elinezindlu zangasese. Ibhafu okanye ishawari, ezi nkonzo zimbini ziphantsi kwakho ngokweencasa zakho, izinto ozenzayo okanye ozidingayo.
Ngaphandle, uya kuba nebala, elilungele ukutshona kwelanga kunye nokubraya.
Indawo efanelekileyo yokuqala yokuba iintsapho okanye amaqela abahlobo bafumane imbali yenkcubeko kunye nemvelo yendawo ekujikelezileyo, okanye icocoon efanelekileyo yokuvuselela iibhetri zakho ngoxolo njengenxalenye yohambo lwezoshishino, iGîte du Valambourg inefenitshala kunye nobuntu obungathethekiyo kuwe, kwaye idibanisa ubuhle be-rusticity kunye nentuthuzelo yale mihla kwindawo echanileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Michel
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Auvers-sur-Oise